အဖွူရောငျ အိမျလေးတလုံး: May 2010
တကယ်ပါအမေ ...... သားလေ အမေ့ကို တွေ့ချင်တယ် ..... စကားတွေလည်းပြောချင်တယ် ....
ရောက်တက်ရာရာ တွေ ပြောရင်းနဲ့ ဟိုတစ်နေ့ က ည အလုပ်က အပြန် တက်စီပေါ်မှာ အမေ့အကြောင်းလည်း ပါတာပေါ့အမေရယ် ..........
မဟတမ ဂနီ ခေတ် မဟုတ်တော့တာတော့ သေချာတယ် အမေ...............
သားလည်း အမေ့လောက်တော့ နားမလည်ပါဘူး .............
သို့သော် .......... စားပင်တွေ ကြီးစေချင်ရင် ပေါင်းပင်တွေကိုတော့ ရှင်းရမှာပဲ အမေ ..............
တခါတလေလည်း ပိုးကောင်တွေကို ဒီတိုင်းမောင်းလို့ မရတော့ရင် တော့ အင်း ပိုးသတ်ဆေးတော့သုံးရတာပဲ မဟုတ်လား ...........
သားက ဥာဏ်နည်းပါတယ်လေ ........
အမေ ကိုတော့ ပြောပြချင်တယ် ........... အကြောင်းတွေ
အခုရက်အတွင်း စိတ်တွေက ရွာလေးဆီ ပြန်ရောက်နေမိတယ် ............ဂရောက်ဂယက် အတွေးတွေ ရောက်နေတာက မကြာမီလို့ ပြောနေတဲ့ ကာလလေးတစ်ခု .............
ဖတ်နေမိတာက အောင်ခြင်းရှစ်ပါး အောင်ခြင်းရှစ်ပါး
တခါတခါတော့လည်း သည်းခံခြင်းတရားဆိုတာထက် ..............
အမေ့ကိုလည်း စကားတွေပြောချင်သည် ...................
အမေမှန်ပေမယ့် .................... တခါတခါ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့မှုတွေကို အခွင့်ကောင်းယူတက်ကြတာ အမေ ပြန်တွေးစေချင်တယ် ..................
ဘာဖြစ်ဖြစ်အမေရယ် ................... နားမလည်တဲ့ သူတွေကို တရားဟောနေတာထက် ...............
ကလေးတွေ ရှေ့ရေးအတွက် တခုခုကိုတော့ ပြတ်သားစေချင်တယ် အမေရယ် .............
ထောက်ခံနေရတာ ဘ၀လား ...........
နားထောင်နေရတာ ဘ၀လား ...............
ခေါင်းညိတ်နေရတာ ဘ၀လား .................
အလုပ်မရှိတဲ့ ဘ၀ ................
အမျိုးကြီးကြီးတွေ မရှိတဲ့ဘ၀ ……………
ဆယ်တန်းအောင် ဖို. ကြိုးစားခဲ.ရတဲ. အချိန်တွေကိုလွမ်းတယ်...........
ကျောင်းကြီးပြီးဖို. ကြိုးစားခဲ.ရတဲ. အချိန်တွေကိုလွမ်းတယ်...........
အလုပ် ရဖို. ကြိုးစားခဲ.ရတဲ. အချိန်တွေကိုလွမ်းတယ်...........
မျှော်လင်.ချက် မဲ. ကြိုးစားနေရတဲ. မနက် ဖြန်တွေကို မုန်းတယ်...........
အဟုတ်အဟတ်မဟုတ်တဲ့ လုပ်ဇာတ်ခင်းပြီး ဆက်သွားအုံးမယ့် Road Map ဆိုတာကြိးကို မုန်းတယ် ………….
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို မီးပျက်လို့ မကြည့်လိုက်ရတဲ့ ညတွေကို မုန်းတယ် …………..
ခနာကိုယ်ကို ဈေးကောင်းရဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရောင်းစားနေရတဲ့ သူတွေကို မုန်းတယ် ……………
မရေရာတဲ့ မနက်ဖြန်တွေ ကိုလည်း မုန်းတယ် .............
၀န်ခံချက် ၊၊ ၊၊ မကြာမီ ကျင်းပတော့မယ့် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ပွဲတော် ကြီးအား ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုပါ၏ ၊၊
လူသားတွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ဖို. မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက် ရဲ့ မာတာ မိခင် ကျေးဇူးရှင် ကြီး၏ နောက်ဆုံးအချိန် ၊၊ သစ်ပေါဝါးပေါ နဲ. ဆောက်ထားတဲ့ နှစ်ဆောင် ပြိုင် အိမ်ကြီးရဲ့ အိမ်ရှေ. ဧည်.ခန်း ဆီက ကျွန်းကုတင်ကြီးပေါ်မှာ လဲလျောင်း ရင်း သားမောင် ဆရာဝန် အလာကို စောင့် စားနေတဲ့ အမေအို တစ်ယောက်ရဲ့ နေ၀င်ချိန် ၊၊ အမေအို အသက်ရှု ရပ်သွားမယ့် အချိန်ကို ၀ိုင်းဝန်း စောင့်စားနေကြတဲ့ တူတွေ တူမတွေ ၊၊ မသိမသာ နဲ. ပစည်းတွေ ရှင်းလင်းဖို့. ပြင် ဆင်နေကြတဲ့ တူသားလုပ်သူတွေ ရဲ့ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် ရွေ.လျား စီမံနေပုံ တွေ ၊၊ အမေအိုတစ်ယောက် ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်အတွက် ၊ ပြုပြုခဲ့သမျှသော ဒါနသီလတွေ အတွက် ပြန်လည် အောက်မေ့ နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို. ၊ နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာ ဘ၀ကူး ကောင်းစေဖို. ဖွင့်ပြနေတဲ့ တရားသံတွေ ၊၊ တခါတခါ “အိ” ကနဲ ရှိုက်လိုက်တဲ့ တူမတွေ ရဲ့ ကြေကွဲသံ တိုးတိုး ၊၊
ဟိုးအဝေးဆီက ဥသြသံ ပေးပြီး ၀င် လာမယ့် လော်ကယ် ရထားတစ်စင်းရဲ့ ဆွဲဆွဲ မြေ့မြေ့ တွန်လာမယ့် အသံ ရှည် ကြီးကို ရင် တမောမော မျှော်လင့် နေကြတဲ့ အမေအို အနီးက ဆွေမျိုးတွေ ၊၊ အဲဒီရထားသံ ကိုပဲ စောင့် စားနေတဲ့ အမေအို ရဲ့ ခပ်မျှင်းမျှင်း အသက် ဆက်နေသံ ညှင်းညှင်းသွဲ.သွဲ. ၊၊ သားမောင်တစ်ယောက် ဒီလော်ကယ် ရထားကြီးနဲ. များပါလာမလား ၊၊ဒါတွေ အားလုံးဟာ သားမောင် ဆရာဝန်ကြီး အတွက် အမေအို ရဲ့ နောက်ဆုံး မျှော်လင့် ချက်လား ၊၊ တစ်ချက်တစ်ချက် လွင့်ပျံလာတဲ့ ဘကြီးမောင်ရဲ့ ကြေးစည်သံ လွင်လွင်လေးက လေဝှေ. မှာ အမေအိုဆီ ကို လာလာဦးခိုက်လို. ၊၊ မကြားတစ်ချက် ကြားတစ်ချက် ပရိတ်သံလေးကို အမေအို နားစွင့်နေပါသလား ၊၊ ဘုရား ဘုရား လို.မတပဲ သား သား လို. တရင်း လော်ကယ်သံကို နားစွင့်နေပါသလား ၊၊ ဘာမှမပြော နိုင်တော့တဲ့ အမေအိုသာ သိပေ လိမ့်မည် ၊၊
ကြာနီကန်ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ တရားသံက မာဆတ်ဆတ်ရယ် ၊ တလွင့်လွင့် တသာသာနဲ့ သံဝေဂနဲ. တရားရစရာ ၊၊ အမေအိုအတွက်များ ဒီတရားကို ဟောခဲ့လေသလား ၊၊ “ …….အရုပ်ကလေးတော့ လုပ်ပြီးပြီ ၊ ဆေးချယ်လို. ….ကဟယ် ဂဟယ် နဲ. ပညာ တွေ သင်လို. …. ဒီလိုနဲ. BA တွေ BSC တွေ BED တွေ ရပြီးသကာ လ ၊ ကိုယ် မြတ်နိုးရလိမ့်မယ် လို. မထင် …. ” ရင်ကမွေးတဲ့ သားကို ကကြီး၊ ခခွေး မှသည် ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာ သည် ထိ ရုန်းကန် ထိန်း ကျောင်း ပြုစု လာခဲ့ ရသည့် မုဆိုးမ အမေအို အတွက် မောသမျှ ပန်းသမျှ ၊ သားမောင် အပြုံး တစ်ချက်နဲ. ပိန်းကြာဖက်ပေါ် ရေမတင်သလို အားလုံးကင်းစင်ပျောက် လွင့်ခဲ့ ရသည် ၊၊
ဖတဆိုး သားပေသည့် လိုအပ်ချက်တွေ မရှိစေရ ၊၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စီးပွားရေး တောင့်တင်းခဲ့ လေတော့ ၊ သာလှလူလေး မေ့ရွှေသွေးကို ချွေးတစ်ချက်ပင် မစို.စေ ချင်ခဲ့ ၊၊ သာလူလှ လည်းတော်ပါပေသည် ၊၊ တောမက မြို.မကျမှာ လူဖြစ်ရပေသည့် ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်မှာပင် ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် အမေ့ အလို ကျ ကြိုးစားပြခဲ့သည် ၊၊ တစ်ရွာလုံးမှာ တစ်ယောက် ၊ တစ်နယ်လုံးမှာတစ်ယောက် ၊ တစ်ခရိုင် လုံးမှာမှ တစ်ယောက် ငါ့သားလူလှ ဒီနယ် တခွင်မှာ ယှဉ်နိုင်သူ ရှိကောင်းလားအေ့ ၊၊ လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ ငါဟဲ့ ဆရာဝန် အမေ ၊၊ ယှဉ်စမ်း ၊၊ မယ်ထွေးတို. ၊ လှအေးတို. ၊ မြစိန် တို့ ညည်းတို.ကျန်တာ ပြိုင်လို.ရမယ် ၊ ငါလို ဆရာဝန် အမေဘ၀ ညည်းတို. အိပ်မက်တောင် မက်နိုင်ရဲ့လား အေ့ လို. ၊ မာနတွေ တထူတူ နဲ. သားလူလှ ဆရာဝန်ကြီး ရဲ့ မိခင် ၊၊
နှစ်ရှည် တက်လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းအတွက် ကုန်လိုက်ရတာ ရှိသမျှလေး လည်း ပြောင်လို. ၊၊ လူမသိသူမသိ သားမောင် မသိအောင် လက်သိပ်ထိုး ရောင်းရပေါင်ရတာ တောင် မှ မုဆိုးမ အမေအို အပြုံးတစ်ချက် မပျက်ခဲ့ ၊၊ သားမောင်အတွက်ဆို လျှင် စကားအရာနဲ. အနိုင်ယူ ခဲ့ဖူးတဲ့ လှအေးတို. မြစိန်တို. ဆီ အောက်ကျခံ ရဖို.လည်း အမေအို ၀င်မလေး ၊၊ ကျုပ်သား ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်တဲ့အခါ ကျုပ် မှာ ဘာမှ မကျန်အုံး ကျုပ်ကျေနပ် ပါတယ်အေ ၊၊ ညည်းတို.များတက် နိုင်လို. ညည်း သား ထွေးမောင် တို. အေးသာ တို. ဆေးလိုင်း လိုက်နိုင်လို.လား အေ ရဲ့ ၊ နွားကျောင်း ကျွဲကျောင်း နဲ. ဖြစ်လှ စပါးပွဲစား ပေါ့အေ လို. တောင် ပုတ်ပုတ် ခတ်ခတ် အထက်စီးက စကားနာ ထိုးခဲ့သေးရဲ့ ၊၊
ဒီလိုနဲ. သားမောင်လည်း ဘွဲ.ရ ၊ အမေအိုလည်း ဖြူကာဖြာကာ ကျရလေတော့သည် ၊၊ သို.ပေသည့် အမေအို မာန်မလျှော့ ၊ ဇွဲခတ်လို. လှော်နေဆဲ ၊၊ သားမောင် ပြန်အလာ ဖွယ်ဖွယ် ရာရာ တွေ နဲ. ဧည့်ခံ နေမြဲ ၊၊ နားကပ်ကလေးမေးတော့ အမေနားတွေ နာလို. သား ရယ် ၊ အသက်တွေ ကြီးတော့ စိန်တွေ ရွှေတွေ လည်း အမေ မ၀တ် ချင်ပါဘူး သားရယ်လို. သားမောင်ကို စိတ်မဆင်းရဲ ဖို. ညာနေဆဲ ၊ လိမ်နေဆဲ ၊၊ သားလုပ်သူက ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ. အမေ မ၀တ်ချင်တော့ ၊ အမေ့ချွေးမကို ပေးဝတ်လိုက်ပေါ့ အမေရယ် ဆိုတော့ အမေအို ဘယ်လိုများ နေရှာမတုန်း …………….. နင့်ကနဲ ၊ နင့်ကနဲ ……. သစ်ပင်ထက်ကကျသူကို ရိုက်နှက်ဘိသကဲ့သို. ဆိုတာထက် အမေအို ရင်တွေ တဆက်ဆက် နာရပြီကော ၊၊
တလိမ့်လိမ့်ဆင်းလာတဲ့ အသုံးမကျတဲ့ မျက်ရည် ပူတွေ ကို လက်ဖမိုးနဲ. ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးသုတ်လို. ငါ့သားလေးတောင် အရွယ် ရောက်မှ ပဲလို. ခပ်မာ မာ တွေးပြီးခေါင်းကို တစ်ချက်ခါ လိုက်တဲ့ အမေ့အို. မျက်ဝန်းက လွင့်သွားတဲ့ မျက် ရည် တစ်စက်က သားမောင် လူလှ ကို တင့်တောင် တင့်တယ် အိမ်ထောင် ချပေးဖို. ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးအတွက် အားတစ်ချက်ပေလား ၊၊ အမေအိုမမောနိုင်သေးပါ ၊၊ သားမောင်ကို လည်း တရားဝင် မမေးဝံ့သေးပါ ၊၊ သဘာဝကို အမေအို ရှောင်မဖယ်ချင်ပေမယ့် သားမောင် နှူတ်ကထွက်လာမယ့် ဟုတ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားတခွန်းကို အမေအို ရင်မဆိုင် လိုသေး ၊၊ အားတွေ မွေးဖို. လိုပါအုံးမည် ၊၊ အားတွေ မွေးဖို. လိုပါပေအုံးမည် ၊၊
အမေရယ်ခရီးကလည်းဝေးတယ်၊အမေရထားစီးရမှာလည်းပင်ပန်းပါတယ်၊၊ မင်္ဂလာဆောင် ပြီးလို. အေးအေးဆေးဆေး နောက်မှ ပဲ သားတို.လာ ခဲ့ပါမယ် ၊၊ အမေ့ချွေးမ မမ ကလည်း ခရီးဝေး မသွားချင်သေးဘူး ဆိုလို. မခေါ်လာခဲ့ ဘူး အမေဆိုတော့ လည်း အမေအို က ပြုံးပြုံးလေးနဲ. ခေါင်းလေးညိမ့်လို. ပီဘိ ကျေနပ် နေသည့် အလား ၊၊ ရင်ထဲကခံစားချက်သားမောင် တစ်ချက်မသိစေရ ၊၊ အင်း အမှန်လည်း ကျေနပ်မှာပါလေ ၊၊ စုဆောင်းထားတာလေးတွေ ပေးလို. သမီးချွေးမ ကို အမေ့ မင်္ဂလာဦး နားကပ်လေး လက်ဖွဲ.လိုက်ပါ သားရယ် ဆိုပြီး မမြင်ဖူးတဲ့ ချွေးမကို စိတ်ကူးနဲ. လှမ်းချစ်လို. ၊၊ နောက်တစ်နေ. ဈေးသွားတဲ့ အခါ သားမောင် လူလှ အိမ်ထောင်ကျပါပြီ ဆိုတဲ့ အကြာင်း ကြေငြာမောင်းခတ်လို. ကြွားးပေအုံးလ်ိမ့်မည် ၊၊
သြော်ဒီလိုနဲ. အမေအိုဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန် ထိသားမောင် ကို မျှော်ရင်း ဘ၀မကူး နိုင်သေးပဲ အသက်ကို မျှင်မျှင်း ရှုရင်းစောင့်လို. ၊၊ဆရာဝန် တစ်ယောက်မွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ အမေ ၊ ဆေးတစ်ပေါက် အပ်ရာ မကျန်ဘူးခဲ့ ၊ ဆေးတစ်လုံးသားမောင်တိုက်တာ မမြိုဘူးခဲ့ ဘူး ၊၊ သားမောင်ကမ်းပေးတဲ့ ရေတစ်ခွက် တောင် ဆေးအမှတ်နဲ. မသောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ အမေအို ၊၊ အသက်ကိုမျှင်မျှင်းရှု ရင်း ၊ ဘုရားကို မတ ၊ သား ကို တနေရှာသူ ၊၊ သားတစ်ယောက်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်းများစွာ အတွက် သားမောင် ဆီကဘာကိုမှ ပြန်လည် မတောာင့်တခဲ့သူ ၊၊ ပေးဆပ်ခြင်းများစွာနဲ. ရင်းနှီးမှူပေါင်း များစွာကို ရက်ရက်ရောရော ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့သူ ၊၊ ဘာကိုမှ ပြန်ယူမသွားခဲ့တဲ့ ထာဝရ မေတ္တာရှင် ၊၊ နောက်ဆုံး အချိန်လေးမှာတော့ သားမောင်ဆရာဝန်ကြီးကို တွေ ချင်ရှာပေလိမ့်မည် ၊၊ သားတိုက်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်ထက် သားပေးလာမယ့် အကြင်နာလေးတစ်ချက် တော့ မျှော်လင့် ရှာပေလိမ်မည် ၊၊ ပုံမှန်ဝင်နေကျ လော်ကယ်ရထားကြီး က ဥသြသံ လေးသဲ့သဲ့ ကြားရချိန်မှာတော့ အမေအိုလည်း အသက်ကလေးမျှင်းမျှင်း ရှုရင်း ဖြေးဖြေးချင်း ရပ်ခဲ့လေ ပြီ ၊၊
ကျွန်တော့်စကား တောင် မဆုံးလိုက်ရပါဘူး ၊
မီမီဆီက " ဟင်းဟင်း မီမီဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကိုမင်းသစ် သိပါတယ်လေ ၊ ကိုမင်းသစ် တစ်ယောက် ကတောင် နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ ခု ကုမ္မဏီမှာ မီမီကို ပြောနေတဲံ လူတွေ အားလုံးကို မီ အပြစ်မတင်တော့ဘူး ကိုမင်းသစ် " နာကျင်ကျေကွဲနေတဲ့ မီမီရဲ့စကားလုံးတွေက နာကျည်း မှုနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါ
တစ်လောကလုံးက မှားတယ်ဆိုရင်တောင် မပြင်တော့ဘူးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ချပြီးတဲ့သူတစ်ယောက်လို မီမီဟာ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြတ်သားဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ပုံပါပဲ ၊၊ မီမီကကျွန်တော့် စားပွဲရဲ့ ဘေးကပ်ရပ်စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး AutoCad ဆွဲနေတာပါ ၊၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနေ့ညနေ အိမ်တစ်လုံးအတွက် Estimate ပေးဖို့ ချိန်းထားလို့ တွက်နေတာပါ ၊၊ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္မဏီမှာ ကဒီအချိန်ပဲ လူရှင်းပြီး စကားပြောလို့ရတာပါ ၊၊ ၀န်ထမ်းအများစုက ၁၁ နာရီခွဲ ကနေ ၁၂ နာရီအတွင်းဆို အများစုက Dining Room ထဲကိုရောက်နေပါပြီ ၊၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အလုပ်ရှိရင်ရှိသလို ၊ အားချင်းပေးစရာ ရှိရင် ပြီးမှ ပဲ စားလေ့ရှိပါတယ် ၊၊ နောက်တစ်ခုကတော့ မီမီ အနေနဲ့ က ခုတလော အခြားသူတွေကို မဆုံချင်တာ လည်း ပါမှာပါ လေ၊၊
" နင်စဉ်းစားပါအုံးမီမီ ရယ် ၊ အရာရာ ဟာ သတိထားပြီး ဆုးံဖြတ်ရမှာပါ ၊၊ ပြင်လို့ ရပါသေးတယ် ဟာ ၊၊ နောက်ပြီး မီမီကိုမေးမယ်နော် လောကမှာ အရေး ကြီးဆုံးက ဘာလဲ " ဆိုပြီး ကျွန်တော်က ဖျောင်းဖျရင်း မေးတော့ မီမီကတစ်ချက်လှည့်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ထီမထင်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကြည့်ရင်းပြောလိုက်တာ ကတော့ " ငွေပေါ့ ကိုမင်းသစ်ရဲ့ အဲဒါ မီမှားလား ၊ ဟင်းဟင်း " ဆိုပြီး ပြန်လှည့်ပြီး ပုံဆက်ဆွဲနေပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော့်မှာသာ လက်ထဲက Calculator နဲ့ ဘောပင်ကို ချရင်း " မီမီ နင်မှားနေပြီ နင်အရမ်းကို မှားနေပြီ သိလားသူငယ်ချင်း နင် နင် " ဆိုပြီး ပျာပျာသလဲ ပြောနေမိ တားနေမိပါတယ် ၊၊
မီမီ နားလည်းလက်ခံအောင် ပြောဖို့ ကျွန်တော့်မှာ စကားလုံး မရှိတော့ပါဘူး ၊၊ မီမီဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း နားလည်လက်ခံအောင် ကျွန်တော် ဘယ်လို စကားလုံးတွေ ကို အသုံးပြုရပါမလဲ ၊၊ " ကိုမင်းသစ်က မီမီရဲ့ အကြောင်းကို အသိဆုံးပါနော် ၊ ကိုမင်းသစ်စဉ်းစားကြည့်ပါ ၊၊ မီမီ ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာ ပညာတက်မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် မီမီမှာ ရွေးစရာလမ်းမရှိဘူး ကိုမင်းသစ် ရေ ၊၊ မီမီချမ်းသာချင်တယ် ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ဒီခေတ်မှာ မိန်းမတစ်ယောက် မြန်မြန်ချမ်းသာဖို့ နည်းလမ်း တစ်ခုပဲ ရှိတယ် ၊၊ ဒါဟာ မီမီ ဘ၀အတွက် အပြောင်းအလဲတစ်ခုပါ မီမီ မငြင်းဆန်နိုင်တော့ ပါဘူး ကိုမင်းသစ် ရယ် "
မီမီဆိုတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ၊ တစ်ကျောင်းတည်း ဆင်းတဲ့ ကျောင်းနေဖက် လို့လည်းပြောလို့ ရပါမယ် ၊၊ နောက် ဒီကုမ္မဏီမှာ လည်း မီမီကို နားလည်ပေးနိုင်သူရယ်လို့ သူရင်ဖွင့်လို့ ရတာ ကျွန်တော်ပဲ ရှိတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ကပိုပြီး ရင်နှီးပါတယ် ၊၊ ရွယ်တူလည်းဖြစ်သလို တစ်ယောက် အကြောင်းတစ်ယောက်လည်း ရင်ဖွင့်နေကြဆိုတော့ နားလည်ကြပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ကောင်မလေးအကြောင်း ရင်ဖွင့်တက်သလို သူကလည်းသူ့ဘ၀အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်တက်ပါတယ် ၊၊
အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကလည်း နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန် ၊ ဆိုတော့ သူ့ကိုပဲ အနီးကပ်သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရင်ဖွင့်ရပါတယ် ၊၊ မီမီမှာ အရင်က နန္ဒဆိုတဲ့ ချစ်သူကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော်တို့နဲ သက်တူရွယ်တူပါပဲ ၊၊ အဝေးသင်နဲ့ ဘွဲ့ရပြီး နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ တက်လမ်းရှာကျိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါပဲ ၊၊ မိဘများကလည်း ပြေလည်ပြည့်စုံပါတယ် ၊၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက နန္ဒက အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကာလပေါ့ ၊၊ အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ နဲ့ စတိုင်ကျကျနေတက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ၊၊ မီမီနဲ့လည်း အင်မတန်မှ ရှေ့သွား နောက်လိုက်ညီပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့ မီမီနဲ့ သာမာန်ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန္ဒ တို့ နှစ်ယောက်က ဘ၀ ချဉ်းကပ်ပုံချင်း တခါတခါ တော်တော်ကို ကွဲလွဲကြပါတယ် ၊၊ နန္ဒ ဟာ ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစု ကလာသလို ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် မီမီ အနေနဲ့တေ့ာ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ရောက် အောင် တော်တော်ကို ကြိုးစားရုန်းကန်တည်ဆောက်ခဲ့၇ပါတယ် ၊၊ ဒါတွေဟာ မီမီနဲ့ နန္ဒ ဆိုတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို တစ်နေရာဆီ တစ်လမ်းဆီပို့လိုက်တာပါပဲ ၊၊ နောက်တစ်ခုကတော့ နန္ဒ က မီမီကို သူ့မိသားစု ဘ၀ထဲကနေ ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားသလို ၊ မီမီအတွက်လည်း နန္ဒဟာ လှေခါးထစ်တစ်ခု မဟုတ်တာသေချာပါတယ် ၊၊
“ အခုအားလုံးက မီမီကိုပြောနေကြတယ်လေ ၊ မီမီသိပါတယ် ဒါပေမယ့် မီမီ ဖောက်ပြန်တာမှ မဟုတ်တာ ကိုမင်းသစ် စဉ်းစားကြည့်လေ ၊ ဦးမိုးမြင့်ယံမှာ အိမ်ထောင် မရှိဘူး နောက်ဒီဇာတ်လမ်းကို မီမီ ဘက်ကစတင်ခဲ့တယ် ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲ မယ် ဆိုရင်တောင် နှစ်ဦးသဘောတူပါနော် ၊၊လက်ခုပ်ဆိုတာ တစ်ဖက်တည်းတီးလို့ မမြည်ဘူး လေ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား ဟင် ” ဆိုပြီး မခံချင်စိတ်နဲ့မေးလာပေမယ့် မီမီကိုယ်တိုင် လိပ်ပြာမလုံဘူး ဆိုတာ သိသာပါတယ် ၊၊ မမှားဘူး မမှားဘူး လို့ ဟစ်ကျွေးနေရပေမယ့် မမှန်ဘူး ဆိုတာ သိနေတဲ့ မီမီကိုသနားမိပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်လိုမှ ပြောမထွက်ခဲ့ပါဘူး ၊၊ “ အသက်လည်းကြီးပြီး ဥပဓိရုပ်မရှိတဲ့ ဦးမိုးကို ဘာ့ကြောင့်ချဉ်းကပ်တယ်ဆိုတာ အရှင်း ကြီးပါ အရှက်မရှိတဲ့ မိန်းမ ၊ ဒီဘက်ကိုပိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ကောင်လေးကိုဖြတ်ပစ်တယ် သနားစရာလေး ပါဟယ် ဟိုက ချောချောလေး ရယ် ကောင်လေးက ” ဆိုတာမျိုးတွေ “ ဒီမိန်းမ ဒါမျိုးလုပ်စားနေတာ ဖြစ်ရမယ် ၊ အရှက်မရှိဘူးနော် အမလေးဟယ် ပြောနေတာများ ချွဲပစ်နေတာပဲ ” ဆိုတဲ့ အပုပ်ချသံတွေ “ ကိုယ့်ရုပ် ကိုယ်ရည် မှ အားမနာဟယ် အဖေလောက်ကြီးကိုများ ” ဆိုတဲ့ ၀န်တို သံတွေ ရယ်ကို အမြဲကြား နေရတာက ကြားလူ ကျွန်တော်ပါ ၊၊ ဒါတွေ ကို မီမီလည်း သိနေတာပါပဲ ၊၊ ကျွန်တော် ဘာမှ ပြန်ပြောပြစ၇ာမလိုပါဘူး ၊၊ လူတွေ ဆိုတာလည်း ခက်ပါတယ် ၊၊ အခုတော့ ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အသံတွေ ထွက်လာရတာပေါ့ ၊၊ သူတို့ပြောတာတွေက ဟုတ်တာတွေရော မဟုတ်တာတွေ ပါ စုံလို့ပါပဲ ၊၊ ကျွန်တော်နဲ့တောင်မှ သမုတ်ချင်သေး ရဲ့ ၊၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သာသိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ တခါတခါ သူတို့ ကဒီလိုပြောရင် ရယ်စရာ ဟာသတစ်ခုလိုပဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါး ရယ်မောနေမိကြရဲ့ ၊၊
“ လောကမှာ ငွေဟာ ထိုက်သင့်သလောက် အရေးပါပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုးကွယ်ရာတစ် ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူးမီမီ ၊၊ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ၊ ဆန္ဒတွေ ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ၊ ဂုဏ်သိကာတွေ အဲဒါတွေကို ရင်းနှီးလဲလှယ်ပြီး ရလာတဲ့ ငွေတွေဟာ တကယ်ရော တန်ရဲ့လား ၊၊ ကိုယ်ပေးဆပ်လိုက်ရတာတွေနဲ့ ပြန်ရလိုက်တဲ့ အရာတန်ပါရဲ့လား ” ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ မီမီကို ဒီမေးခွန်းတွေ မမေးပါဘူး ၊၊ နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက် ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြရင် မေးဖြစ်မှာပါ ၊၊ အဲဒီအချိန်ဆိုရင် ဒေါ်မီမီဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ အဖြေကဘာများဖြစ်လေမလဲနော် ၊၊
၀န်ခံချက် ၊၊ ၊၊ ပိုစ့်အဟောင်းလေးပါ ၊၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကြိုက်လို့ ပြန်တင်မိပါတယ် ၊၊ စာတွေ ဆက်တိုက် ရေးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် ၊၊
တကယ်ပါ ၊၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ဘယ်တော့မှာ ကြီးလှပြီလို့ မထင်မိဘူး ၊၊ အခုချိန်ထိ လှုပ်ရှားတုန်း ရုန်းကန် တုန်း ပြေးလွားနေတုန်း ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ဆုံဖြစ်တဲ့ အခါမှ ပြောဖြစ်ကြတာက ကိုယ်တွေ မေ့နေတဲ့ ကိုယ်တွေ ရဲ့ လက်ရှိအသက်တွေ ၊၊ တကယ်မငယ်တော့ပြီ ၊၊ ၄၀ ကျော် ၅ နှစ်တွင်း မဟုတ်သေးပေမယ့် ကိုယ်တွေ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြီးလှပြိလို ထင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီလူကြီးတွေရဲ့ အသက်တွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ၊၊ အိမ်ထောင် တာဝန်တွေ မရှိကြသေးတော့ လည်း အသက်တွေကို ပိုမေ့နေကြပြီ ထင်သည် ၊၊ အင်း ကိုယ်တွေ အောက်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှ ကိုယ့် တူတွေ တူမတွေကို အထက်တန်းပြီးလို့ ကောလိပ်တွေ တကသိုလ်တွေ ရောက်နေ ကြပြိ၊၊ သူတို့တောင်မှ မကြာခင် ကြင်ယာစုံတော့မည် ၊၊ အော် အင်း တကယ် မငယ်တော့ပါလား ၊၊ တခါတခါ အခြားသူတွေ မေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ အမှန်တကယ်အသက်ကို မေ့လျော့လို့တောင် နေမိသည် ၊၊ မလိမ်ညာ ချင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် တကယ် ကိုတခါတလေ မေ့လျော့လို့ ၂၀ ကျော် သာသာ ထင်မှတ်နေသေးတာ ၊၊ အခုတလော အသက်တွေ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်နေမိသည် ၊၊ အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ညစုံဖြစ်သည် ၊၊ ပြောဖြစ်ကြတာက မငယ်တော့တဲ့ အသက်တွေ အကြောင်းပေါ့ ...............
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း မပြတ်သားနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ် ၊၊ ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ လို့ ဘာသာ အကြိမ်ကြိမ် မေးမိတာလည်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း မသိတော့ ပြီ ၊၊ ကျွန်တော် ဖောက်ပြန်နေမိပြီလား ၊၊ ဟင့်အင်း ကျွန်တော် မဖောက်ပြန်ပါဘူး ၊၊ ဖောက်ပြန်တာကို ကျွန်တော် အင်မတန် မုန်းသည် ၊၊ ကျွန်တော် ညိုလေး အတွက် ဘယ်လောက်တောင် စောင့်ထိမ်းခဲ့လဲ ၊၊ ကိုယ်တိုင်သာအသိဆုံး ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေ သာအသိဆုံး ၊၊ သူ့နာမည် ကို နှုတ်ကမချလို့ ဘေးကလူတွေတောင် အမြင်ကပ်ပေမယ့် ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ခဲ့ ၊၊ ကျွန်တော့် အတွက် ညိုလေးဆိုတာ ဘ၀ ၊ မရှိမဖြစ် ၊၊
တခါတလေ စံပါယ်နဲ့အတူတူ ထမင်းစားနေရပေမယ့် ကျွန်တော် ညိုလေးကို လွမ်းနေတာ ကျွန်တော်သာ အသိဆုံးပါ ၊၊ တခါတလေ စံပါယ်နဲ့ အတူ ရေကူးကန်မှာ ရေအတူကူး နေရပေမယ့် ညိုလေးကို လွမ်းနေတာ ကျွန်တော် သာ အသိဆုံးပါ ၊၊ စံပါယ်လည်း အသိဆုံးပါ ၊၊ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ အရာအားလုံး ဟာ ညိုလေးရဲ့ အရိပ်ပါ ၊၊ စံပါယ်ချက်ကျွေးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး စားနေရပေမယ့် ကျွန်တော် ညိုလေးကို ချစ် နေဆဲပါ ၊၊ အခြေအနေအရ ညိုလေးနဲ့ ခွဲနေရပေမယ့် ကျွုန်တော် ညိုလေးကို ပဲ အသက်မက ချစ်နေ လွမ်းနေဆဲပါ ၊၊ မြန်မာပြည်မှာ ပျော်တဲ့ ညိုလေး ကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ပေမယ့် ခုချိန်ထိ ရောက်မလာခဲ့ ပေမယ့် မျှော်လင့်နေမိဆဲ ၊၊ စံပါယ်ကတော့ ကျောင်းအတူတူ လာတက်တဲ့ သူချင်းမို့ ပိုတွဲဖြစ်ခဲ့သည် ၊၊ ကျွန်တော့်အပေါ်အင်မတန်မှ နားလည် နိုင်တဲ့ စံပါယ့်ကိုတော့ သံယောဇဉ် ပိုမိသည် ၊၊ နှစ်ယောက်လုံး ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်ရတော့ ပိုတွဲဖြစ်လာသည် ၊၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ညိုလေးကို ချစ်ပါသည် ၊၊ ကျွန်တော် ချစ်ဆဲ လွမ်းဆဲ ဆိုတာလည်း အများသိအောင် ပြောနေဆဲပါ ၊၊
ဒီနေ့တော့ စံပါယ် ငိုနေရပြီ ၊၊ မကြာခင် ညိုလေး လိုက်လာတော့မယ်တဲ့ ၊၊
ငိုနေတဲ့ စံပါယ့်ကို ချော့နေရတဲ့ ကျွန်တော် ၊၊ ဘာသာ လိပ်ပြာမလုံပေမယ့် စံပါယ့်ကို တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ ၊၊ ကျွန်တော့်နှလုံးသားက စံပါယ့် ကို ထားရစ်ခဲ့ဖို့ လက်မခံတော့ ၊၊ ဒါဆို ကျွန်တော် သူ့ကို ချစ်နေပြီလား ၊၊ မဟုတ်နိုင်ဘူး ၊၊ ကျွန်တော်ချစ်တာ ညိုလေး ပဲ ၊၊ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေရစ်ခဲ့တဲ့ ညိုလေးပဲ ၊၊ ကျွန်တော် ညိုလေးကိုပဲ ချစ်တယ် ၊၊ သေချာတယ် ကျွန်တော် ညိုလေးကိုပဲ ချစ်တယ် ၊၊ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲမှာ တစ်ရှိုက်ရှိုက် ငိုနေတဲ့ စံပါယ်ရဲ့ ခေါင်းလေးကိုပွတ်လို့ ချော့ရင်း တွေးနေမိတာက ကျွန်တော် ညိုလေးကို ချစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ ၊၊ ညိုလေးဟာ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော့်ကွယ်ရာမှာ ကျွန်တော် မသိအောင် ဖောက်ပြန်နေပေမယ့် ကျွန်တော် ညိုလေးကို ချစ်နေဆဲပါ ၊၊ ကျွန်တော် ဖောက်ပြန်တာကို မုန်းသည် ၊၊ သို့သော် ညိုလေးကို ချစ်သည် ၊၊ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲမှာ တစ်သိမ့် သိမ့်ရှိုက်နေတဲ့ စံပါယ့်ကို ချော့ရင်း ၊ စံပါယ့် ကျောလေးကိုပွတ်သပ်ချော့ရင်း ကျွန်တော် ညိုလေး ကို လွမ်းပါသည် ၊၊
ကျွန်တော် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ ၊၊ ကျွန်တော် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ …….